Antom-pisian’ny komity momba ny fampihavanam-pirenena (CRN) seksiona vehivavy eto Madagasikara izay mivondrona ao anatin’ny fikambanan’ny vehivavy mpanelanelana aty afrika (FEMWISE Africa). Nahazo fampiofanana avy amin’ny firenena mikambana manokana ireo vehivavy mivondrona ao ny amin’ny fitantanana disadisa (gestion de conflits). Nozarain’ireo CRN vehivavy tamin’ny vehivavy Malagasy izany tetsy amin’ny minisiteran’ny toekarena tamin’ny faran’ny herinandro teo satria na ny fiainany andavanandro ao amin’ny tokantrano, ny fokontany, ny firenena aza, hoy izy ireo dia efa misy disadisa ary anjara biriky entina amin’ny fampandrosoana izany. Tanjona manaraka ny hamoronana mihitsy ny tambajotram-behivavy misehatra tanteraka anatin’ny fihavanam-pirenena sy ny fandriampahalemana amin’ny faritra 22 ary atambatra amin’ny firenena afrikanina izany. Lesoka tokony heverina haingana, hoy izy ireo ny fahazoana ny vaovao eto Madagasikara satria maro be ny vehivavy tsy taitra amin’izany na dia efa tokony hirosoana aza, indrindra eto amin’ny firenena.